अत्येंत मार्मिक प्रसंग : बाँझोपन – Superhit News
अत्येंत मार्मिक प्रसंग : बाँझोपन
जब घरमा प्रबेश हुन्छ । रेडीयो नेपालको आवाज कानमा ठोकिन्छ । कहिले गित ,कहिले समाचार, कहिले नाटक त कहिले स्वास्थ्य जानकारी कानमा ठोकिन पुग्छ । रेडियोको जानकारी बद्ध, ज्ञान बद्ध र चेतना बद्ध कार्यक्रम समयले भ्याए सम्म म सुने गर्छु ।
एक दिनको कुरा रेडियोमा बाझोपनको बारे डाक्टरको परामर्स आई रहेको रहेछ । ३० मिनेटको कार्यक्रम पुरै सुन्न पुगे । यसलाई सकरात्मक मानौ या नकरात्मक डाक्टरले कसलाई परामर्स दिन्छ्न। पुरुषको स्वास्थलाई वा नारी पुरुषको समग्र स्वास्थलाई ? कुन डाक्टरको परामर्स साचो ? समग्र स्वास्थ्य सेवाले बिहे वारी २० बर्षपारी भनिरहेको सुन्छु अनि शिक्षाको सिकाई पनि त्यस अनुसार नै गराई रहेको छ । उहा डाक्टर साबले कहा सिक्नु भयो ? उहाले उदाहण लिदा पुराना पुस्ताको लिनु भएको थियो जहा बिश्व भर बाल बिबाह भनेर बिरोध गरिरहेका छन् । उहाले भन्नु भयो किशोरा अवस्था १० देखि १९ बर्षलाई मानेर यि उमेरमा हुने हिम्सा र बढ्दो यौन हिंसा रोक्ने कोशिशभै रहेको समयमा एउटा बाझोपन बिशेषज्ञले पुरुषले १४ बर्षको उमेर देखि कुनै न कुनै तरिकाले यौनकार्यमा सह्भागी भैरह्नुपर्छ जस्ले गर्दा बाझोपनबाट बच्न सकिन्छ ।
१४ बर्ष उमेर देखिको यौन नियमित या हप्तामा २ वा ३ पटक यौन सम्बन्ध राख्नु बाझोपनबाट बच्ने एक उपाए हो भन्दा समाजमा कस्तो सकरात्मक या नकरात्मक असर पर्ला ? १४ बर्षको पुरुषले राख्ने यौन सम्बन्धले समाजमा कस्ता असर देखा पर्लान ? भन्दै जादा उहाले भन्नु भयो । पहिले सानोमा बिबाह हुन्थ्यो बाझोपन हुदैन थियो । उहाले बाझोपनको समस्या धेरै राम्रोसंग प्राक्टिकल कथनलाई आधार बनाएर त गर्नु भयो । एदा कदा देखिएका बाझो पनलाई लिएर तर महिलालाई १२ बर्ष देखिको यौन सम्बन्धले कस्तो असर पारेको छ पढ्नु भएनछ की ।
उहा तराईको डाक्टर हुनुहुन्थ्यो । उहा जस्तो १४ बर्षको उमेरमा यौन सम्बन्ध आबस्यक छ भन्ने अध्यन गर्ने डाक्टरको शिक्षाको कारण नै तराईमा घर घरमा बलत्कारको समाचार सुन्नु परेको छ । पुरुष प्रधान देशमा ति डाक्टरले बाबुको ज्ञान सिकेका रहेछ्न । उनले आमाको पिडा बुझेको भए महिलाको स्तन क्यान्सर र पाठेघर क्यानसर बारे पढेका भए बाल यौन हिंसा र त्यसको असरको खुलेर भन्नु हुन्थ्यो ।
उहाले खाली बाल्टी र भरि बाल्टीको कुरा गरि रहदा बाझोपनको समाधान त होला पुरुषमा लाग्ने नामर्दको दाग त मेटाउलान तर महिलाले अल्पआयुमै मिर्त्युसंग लडी रह्ने कहिलेसम्म समाजमा ? १४ बर्षमा यौन सम्बन्ध राख्ने युवा(कानुनले बालक भन्ने पुरुष)को सहकर्मी साथी कति बर्षकी हुनु पर्ला ? एक सचेतकले कस्तो सचेतना बाढ्ने ?
← येसरी मनाइयो टोपी दिवस
गजल : आजको नेपाल →